Tag: chee na Google | Martech Zone
Tag: chee na Google
Marketinglọ ọrụ na-ere ahịa n'onlinentanet na-aga n'ihu na-enwe ọganihu n'inye nkà na ụzụ nke na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịkọ ma na-enye ụzọ iji nyere ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ aka ịgbanwe. Anyị emeela ụfọdụ echiche ruo ugbu a. Isi okwu nke personas na ahịa dị egwu dị ọtụtụ karịa ma na-agbanwe agbanwe karịa ka anyị siri chee. Cisco enyela nyocha na ngwaahịa a zụrụ nwere ihe karịrị 800 njem ndị ahịa dị iche iche na-eduga na ya. Chee echiche
Data sitere na ndi ahia gi ugbua… site na ekwenti ha, ihe omuma ha, desktọọpụ ọrụ ha, mbadamba ha na ọbụna ụgbọ ala ha. Ọ naghị akwụsịlata. N’oge na-adịghị anya, m gara ileta ezi na ụlọ anyị na Florida ebe anyị kwalitere sistemu mkpu ụlọ. Ejikọtara mkpu ahụ site na andntanetị ma ọ bụrụ na isntanetị ala, ọ na-ejikọ site na njikọ ikuku dị n'ime (na batrị ma ọ bụrụ na ike efuru). Emeputara sistemu iji choputa